एक म्यंगमा दुई तरबार अट्लान त ? | Everest Online News
अप्रील 2, 2018 अप्रील 2, 2018
एक म्यंगमा दुई तरबार अट्लान त ?
Reporter: Everest Online News KP Oli, Prachand, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र
काठमाडौँ ,चैत्र १९ गते।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मिलेर एउटै पार्टी बनाउने करिब टुंगो भएपछि स्वभाविक रुपले भन्न थालिएको छ।
ओली र दाहालबीचको एकताले पनि उब्जाएको छ– भागबण्डा मिलेन भने के होला ? ‘एउटै म्यंगमा दुई तरबार रहलान् त ?’ भन्ने उखान पनि छ । यी सबै त उखान र विगतका अनुभवहरुको कुरा हो । ‘हामीले असंभव देखिने कुरालाई संभव बनाउनुपर्छ तब मात्र मानव जातिलाई योगदान दिन सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं,’ दाहालले हालै अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
के उनले भनेजस्तो एक म्यंगमा दुई तरबार अट्लान ?
ओली र दाहालबीच पाँच वर्ष सरकार चलाउनेबारे ‘प्याक्ट’ भएको छ । अनौपचारिक सहमति अनुसार ओलीले तीन र दाहालले दुई वर्ष सरकार चलाउने कुरा भएको छ । पार्टी र सरकार आलोपालो प्रमुख हुने अनौपचारिक सहमति पनि सार्वजनिक भएको छ । यद्यपी दाहालले सबै कुरा पार्टी एकता पछि हुने महाधिवेशनले तय गर्ने घुमाउरो जवाफ दिएका छन् । यसको अर्थ हो, आगामी महाधिवेशनमा दाहाल एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने अवस्थामा ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने मौका हुनेछ ।
सरकारलाई दिएको समर्थनलाई हेर्दा ओली २०४६ पछिकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका छन् । एमाले र माओवादीको चुनावी तालमेल नभएको भए ओली र प्रधानमन्त्री यति शक्तिशाली अवस्थामा पुग्ने थिएनन् । त्यसकारण पनि ओली र दाहालबीच अझै सहकार्य हुने देखिन्छ ।
वामपन्थीको हातमा बहुमतका साथ पहिलोपटक सरकार बनेको अवस्थामा यी दुई नेताबीच अब विकसित हुने सम्बन्धले आगामी नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । योसँगै नेपाली वामपन्थीको भविष्य पनि जोडिएको छ ।
अहिलेको मुलभूत प्रश्नहरु भनेका– सरकार र पार्टीको कार्यविभाजन कसरी मिलाउने ? दुई पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? पार्टीको आगामी कार्यदिशा कुन मोडेलको हुने ? सरकार संचालनमा दुई पक्षको सन्तुलन कसरी गर्ने ?
इतिहास हेर्ने हो भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी गुट र उपगुटले बिग्रिएका छन् । त्यस्ता गुट र उपगुट अहिले पनि छन् । जसका कारण पार्टी विभाजन तरबार संधै पार्टीको गर्धनमाथि झुण्डिरहेकै हुन्छ । एमाले र माओवादीको एकतापछि गुटको अन्त्य गर्नु प्राय असंभव जस्तै देखिन्छ ।
अहिले एमाले र माओवादीमा स्पष्ट दुई–दुई गुट छन् । पार्टी एकता भएपछि चार गुट मिलेर एक पार्टी हुने छ । त्यसबेला दई गुट बढी शक्तिशाली हुने छन्, पूर्व एमाले गुट र पूर्व माओवादी गुट । पार्टी एकता भइसकेपछि दुवै गुटले आ–आफ्नो अस्तित्व खोज्ने छन् ।
हाल पनि एमालेभित्र पूर्व माले, ओली र माधव नेपाल गुट जीवितै छ । यी दुई नेताबीच उचित जिम्मेवारी बाँडफाँड मिलेन भने एउटै जंगलमा रहेका दुई बीच हुने लडाइँको अवस्था आउने छ । त्यसबेला एकले अर्काको अस्तित्व निषेध गर्ने अवस्थामा पुग्ने छन् ।
केही समय अघि सम्पन्न भएका निर्वाचनमा ओली र दाहालले जसरी पार्टी ‘कमान्ड’ सम्हाले, त्यो प्रभावकारी रह्यो । एक दुई निर्वाचनबाहेक वाम उम्मेदवारप्रति विश्वासघात भएन । यी दुई नेताको मुख्य विशेषता नै पार्टीलाई एक आदेशले चलाउने हो । एक प्रकारले भन्ने हो भने दुवै नेताले पार्टीभित्र ‘आफ्नो निर्णय’ चलाएर पार्टीलाई सफलतातिर लगेका छन् ।
‘यी दुई व्यक्ति (दाहाल र ओली) मात्र होइनन्, आन्दोलन, इतिहास र जनताले निर्माण गरेका संस्थाजस्ता हुन् । यदि त्यो ‘अथोरिटी’ हुँदैनथ्यो भने दुइटा नेताले सही गरेर लाखौं मान्छे एकतामा लाग्दैनथे ।
‘त्यो अथोरिटी र वर्षौं संघर्षको केन्द्रिय रुप भएको हुनाले यो संभव भयो भनेर बुझ्नुपर्छ,’ दाहालले पार्टी एक हुनुको कारण यसरी खुलाए । यी नेता स्वयं पार्टी जस्ता छन् । जे चाह्यो त्यही निर्णय गर्न सक्ने शक्तिमा पुगेकाले पनि पार्टी एकताका लागि अघि बढ्न सहज बन्यो ।
संघ र प्रदेशको चुनाव अघि तालमेल र पार्टी एकता घोषणा गर्नु यी दुई नेताको ‘बोल्ड’ निर्णय थियो । जबकी त्यसअघि कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहेको माओवादी यूटर्न भएर एमालेसँग मिल्नु नै अचम्मको कुरा थियो । उनीहरुले गोप्य सहमति गरेपछि एकैचोटि तालमेल र पार्टी एकता घोषणा सार्वजनिक गरे ।
एमाले र माओवादी एकता हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन्– पहिलो, दुई पार्टी अलग हुँदा चुनावमा बहुमत आउने संभावना कहिलै नआउने देखिनु । वाम बहुमतको सरकारका लागि यी दुई पार्टी एक हुनु बाध्यता नै बन्यो । दोस्रो, दुई पार्टीको तत्कालीन कार्यनीति र दीर्घकालीन रणनीति मिल्नु ।
शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धासहित आर्थिक समृद्धि तत्कालीन कार्यनीति यिनले तय गरेका थिए । आर्थिक समृद्धिमा टेकेर समाजवादको बाटो लिने नीति यी पार्टीको छ । पार्टी मिल्दा ‘दुवै हातमा लड्डु’ हुने अवस्था आएपछि कुनै बेला अलगअलग धार लिएका एमाले र माओवादी चुनावको मुखमा एकतावद्ध हुने निर्णयमा पुगे ।
यसले खासगरी ओली र दाहाललाई शक्तिशाली नेताको रुपमा देखाउनुका साथै केन्द्रीय सरकारसहित ६ प्रदेश चलाउने ठूलो अवसर मिल्यो । करिब दुई तिहाइ बहुमतको केन्द्रीय र प्रदेश सरकारबाट मुलुकमा समृद्धिको जग बसाल्ने मौका अब छ । त्यो मौकासँगै ठूलो चुनौती छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला सत्तासीन भएका एमाले माओवादीलाई आर्थिक वृद्धिको चुनौती ‘काँडाघारीको यात्रा’ हो । यसमा एमाले र माओवादीका दुई ओली र दाहाल कसरी अघि बढ्लान् ? यसको संकेत देखिन अबको केही महिना कुर्ने नै पर्ने हुन्छ ।
अनुसन्धान विभागले पूर्वराज्यमन्त्री साहविरुद्ध मुद्दा दायर
फोहोर व्यवस्थापनबाट महिला उद्यमी